Showing ५१-६० of ३९४ items.
गसिपमा आएर रमाउन चाहन्नँ
मुम्बई/ बलिउड नायिका इलियाना डीक्रुज व्यक्तिगत जीवनमा सधैं सुरक्षाकर्मीको साथ हुन्छिन्। फोटोग्राफर एन्ड्रीउ निबोनसँग डेटिङमा रहेकी उनले निबोनलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘हबी’ भनेर पोष्ट गर्छिन्। उनी आफ्नो जीवनको निजी कुरा गसिपको चासोको विषय नबनोस् भन्ने चाहन्छिन्। निजी जीवन गसिपको विषयबस्तु नबन्दा त्यसलाई भगवानको आशिर्वाद मान्छिन्। ‘गसिप स्तम्भमा म आफुलाई भाडाकुडाको रुपमा राख्न चाहन्न। कुनै पत्रिकाको गसिप विभागमा मेरो गसिप आओस् भन्ने चाहना छैन। मेरो निजी जिन्दगी नै रमाइलो छ। गसिपमा आएर रमाउन चाहन्नँ,’उनले भनेकी छन्। ३० वर्षीया इलियानाले फिल्म ‘बर्फी’बाट बलिउडको यात्रा शुरु गरेकी थिइन्। उनी पछिल्लो
प्रकाशित मितिः चैत्र १७, २०७४
यी हुन् बलिउडका खतरनाक भिलेनका रियल जोडी
मुम्बई/बलिउड चलचित्रमा भिलेनको अभिनय निर्वाह गर्ने कलाकारका बारेमा हामीले धेरै पटक चर्चा गरेका छौ । अहिले यहाँ भिलेनका रिल नभएर रियल जोडीको चर्चा गर्न खोजिएको छ । शक्ति कपुर र शिवाङ्गी कपुर शक्ति कपुले कयौ चलचित्रमा भिलेनको भुमिका निर्बाह गरेका छन् । उनी रियल लाइफमा शिवाङ्गी कपुरका हिरो हुन् । शिवाङ्गीसँग उनले १९८२मा बिबाह गरेका थिए । शिवाङ्गी फिल्मी दुनिया भन्दा सधै टाढा रहने गरेकी छन् । तर फ्यामिली कार्यक्रममा भने दुबैलाई एकसाथ देख्न सकिन्छ । रन्जीत र आलोका बेदी बलिउडका खतरनाक भिलेन मध्यका एक हुन् रंजीत । उनले १९८६मा आलोका बेदीसँग बिबाह गरेका हुन् । यी दुबैको अहिले दुई बच्चा समेत रहेको
प्रकाशित मितिः चैत्र १५, २०७४
कपिल शर्मालाई दशा लागेकै हो,कारण यस्ताे !
चर्चा एवं लोकप्रियताको उत्कर्षमा थिए, कपिल शर्मा । उनको ‘कपिल शर्मा शो’ यस्तो प्लेटर्फम थियो, जहाँ उभिन बलिउड स्टार्स समेत लालायित हुन्थे । फुर्सदमा बलिउडकर्मीले त्यही च्यानल दबाउँथे, जहाँ कपिल शर्मा हँसाइरहेका हुन्थे । तर, उनमा मात चढ्यो । दम्भ बढ्यो । ‘मैलें जे पनि गर्दा हुन्छ’ भन्ने अहंकारले उनलाई मासेर छाड्यो । आफ्नै सहकर्मी सुनिल ग्रोबरमाथि दुव्र्यवहार गरेपछि उनको लोकप्रियता खुइलिँदै गयो । त्यति लोकप्रिय कार्यक्रम एकाएक बन्द हुन पुग्यो । त्यसबेला कपिल ‘हिरो’ पनि बन्दै थिए । दोस्रो फिल्म ‘फिरंगी’लाई उनले आफ्नो स्टेज शोसँगै अगाडि बढाइरहेका थिए । ‘द कपिल शर्मा शो’ अधोगतिमा लागेकै बेला उनको
अर्बपति मुकेशले दिएको पार्टीमा बलिउड चर्चित कलाकारदेखि क्रिकेटरसम्मको उपस्थिति
काठमाडौं/ विश्वको अर्बपति सूचीमा रहेका भारतीय व्यवसायी मुकेश अम्बानीका जेठा छोरा आकाश अम्बानीको हिरा व्यापारी रसेल मेहताकी छोरी श्लोका महेतासँग विवाह हुने भएको छ । उनीहरुबीच मार्च २४ मा इन्गेजमेन्ट भइसकेको छ । गोवामा भएको इन्गेजमेन्ट भएपछि मुम्बई फर्के लगत्तै सोमबार मुकेशले एउटा भव्य पार्टी दिए । जसमा बलिउडका चर्चित कलाकारदेखि क्रिकेटरसम्मलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । उक्त पार्टीमा बलिउड अभिनेता शाहरुख खान आफ्नी श्रीमती गौरी खानको साथमा सहभागी भएका थिए । यस्तै पूर्व विश्व सुन्दरी तथा बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी छोरी आराध्या बच्चन, कैटरिना कैफ, करण जौहर, जोन अब्राहम, जहीर खान, किरण
प्रकाशको बारेमा जान्नुहोस् भित्री कुरा
साउथ र बलिउड फिल्ममा सबैभन्दा डिमाण्डेड अभिनेता हुन् प्रकाश राज । बलिउडमा नेगेटिभ भूमिकाका लागि आजपनि निर्देशकको पहिलो रोजाईमा उनी नै हुने गर्दछन् । उनको जन्म वर्ष १९६५ मार्च २६ मा बेङलोरमा भएको थियो । प्रकाशले बालचन्दरको 'डिउट' बाट फिल्मी करिअर सुरु गरेका थिए । उनको श्रीमतिको नाम पोनी वर्मा हो । उनको वास्तविक नाम भने प्रकाश राय हो । बालाचन्दरको सल्लाहमा उनले आफ्नो सरनेम परिवर्तन गरेका थिए । उनले अहिलेसम्म पाँच पटक नेशनल अवार्ड जितिसकेका छन् । प्रकाशले बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टिङ, बेस्ट सपोर्टिङ एक्टर, स्पेशल ज्यूरी जस्ता अलग-अलग विधामा अवार्ड उचालेका छन् । बलिउडमा उनले सिंघम, दबंग, व
प्रकाशित मितिः चैत्र १२, २०७४
रिलिज अगावै ‘रेस ३’ को किर्तिमान
बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको ईद रिलिज हुन लागेको फिल्म ‘रेस ३’ लगातार खबरमा छ । फिल्मको लुक्सदेखि नयाँ स्‍टारकास्‍टसम्म सबै चर्चामा छ । यसैबीच यो फिल्मले रिलिज अगावै करोडौं रुपैयाँको विजनेश गरेको छ । मिड डेको खबरअनुसार, फिल्मको स्याटेलाइट राइट्स पूरै १ सय ५० करोडमा विक्रि भएको छ । सलमानको मार्केट मुल्यका कारण फिल्मको राइट्स डबल रेटमा खरिद गरिएको हो । योसँगै फिल्मलाई रिलिज अगावै करोडौं फाइदा भएको छ । फिल्‍मको राइट्सका लागि पहिला ७५ करोडको अफर मेकर्सलाई दिइएको थियो तर टिमले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । पछि सलमान खानको कारण फिल्मलाई दोब्बर मुनाफासँगै १५० करोड मिल्यो । सलमानको पछिल्लो
४७० पटक पढिएको
दीपिका र रणवीर बिबाह गर्दै
एजेन्सी/ बलिउडको सबैभन्दा हट जोडीमध्ये एक रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणको केहि तस्विरहरु सामाजिक संजालमा भाईरल भईरहेका छन् । उक्त तस्विरहरुमा उनीहरु बिवाहको गेटअपमा देखिएका छन् । बिवाहको गेटअपमा सामाजिक संजालमा भाईरल भईरहेको उनीहरुको ति तस्विरहरु बिवाह अघि गरिने फोटोसुट भनिएको छ । खासमा केहिदिन अघि उनीहरुको बिवाह र इंगेजमेन्टको खबर बाहिरिएका थिए । रणवीरसँग दीपिका दुबैको आमाबुबाले बिबाहको मिति पनि मिलेर टुङ्गो लगाएका छन् । बिबाह मिटिङ दीपिकाको घर ‘प्रभादेवी’मा भएको थियो । मिटिङको समय रणवीर र दीपिका सबै परिवारका साथमा सहभागी थिए । दीपिका र रणवीरले बिदेशमा बिबाह गर्ने इच
हजार करोडमा ‘महाभारत’ बनाउँदै आमिर
बलिउड सुपरस्टार आमिर खान अचेल आफ्नो नयाँ फिल्म 'ठग्स अफ हिन्दोस्तान' को सुटिङमा व्यस्त छन् । यसपछि उनको हातमा अर्को एक फिल्म छ । यो फिल्म बलिउड इतिहासको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो फिल्म हुनेछ, जसमा आमिर लिड रोलमा हुनेछन् फिल्म भारतको सबैभन्दा महान ग्रन्थ 'महाभारत' मा बन्नेछ र मेगा बजेटमा निर्माण हुनेछ । ट्रेड एनालिस्ट रमेश बालाले ट्वीट गर्दै यस विषयमा जानकारी दिएका छन् । फिल्मलाई रिलायन्स कम्पनीका मालिक मुकेश अम्बानीले को-प्रोड्यूस गर्नेछन् । उक्त फिल्मको बजेट हजार करोडभन्दा बढी हुने बताइएको छ । रमेशका अनुसार, 'महाभारत' को यो सिरिज ठिक त्यही रुपमा हुनेछ, जस्तो कि हलिउडको 'लर्ड्स अफ
कंगनाको चित्त दुखाई – ‘थुप्रै युवकसँग प्रेममा परें सधै धोका पाएँ ’
मुम्बई/पछिल्लो समय ‘कंगना रनोट’ बलिउडमा सफल नायिकाको रुपमा चिनिन्छिन् । उनले गरेका प्रायः फिल्मले राम्रो ब्यापार तथा चर्चा कमाईरहेको हुन्छ यद्यपी उनको व्यक्तिगत जिवन भने सँधै विवादमा रह्यो ।हालै एक अन्तर्वार्ता दिने क्रममा कंगनाले आफ्नो थुप्रै युवकसँग प्रेम भएको तर कुनै टिकाउ हुन नसकेको बताएकी छिन् । कंगनाले भनिन्, ‘धेरै पटक अफेयर रह्यो । १६ देखि ३० वर्षको अवधिमा धेरै पटक प्रेममा परे । तर, प्रत्येक पटक धोका मात्रै मिल्यो ।’ उनले भनेकी छिन्, ‘यस्तो कुनै मौका नै कहिल्यै आएन, जहाँ म आफैँ कसैलाई ब्रेकअफ दिएको छु, सँधै मलाई नै धोका दिइयो ।’ कंगनाले भनेकी छिन्, ‘प्रत्येक सम्बन्धपछि जिन्दगी नै सकिए
प्रकाशित मितिः चैत्र ९, २०७४
'हिचकी' समीक्षा : रोग कमजोरी होइन, अवसर हो
काठमाडौं/ बलिउड अभिनेत्री रानी मुखर्जीको कमब्याक फिल्म 'हिचकी'शुक्रवार रिलिज भएको छ । आफ्नो उम्दा अभिनयका साथ रानीले यस फिल्ममा छाप छोड्न सफल भएकी छन् । 'हिचकी' एक युवतीको कथा हो जसले आफ्नो कमजोरीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्छिन् । युवतीलाई बारम्बार हिचकी अर्थात् बाडुली लाग्छ । यो टरेट सिन्ड्रोम नामक रोग हो । उनी शिक्षक बन्न चाहन्छिन् तर उनलाई यस्तो रोगका साथ शिक्षकको जागिर पाउन गाह्रो हुन्छ भनिन्छ । तर उनले पढाउने अवसर पाएपछि कसरी आफूलाई प्रमाणित गर्छिन् भन्ने कथा फिल्मले भन्छ । फिल्मको कथा ब्य्राड कोहेनको पुस्तक 'फ्रन्ट अफ द क्लास स् हाउ टरेट सिन्ड्रोम मेड मी द टीचर आई नेभर ह्याड'मा आधारित छ